ukuvinjelwa okuqinile ku division ngo-zero ibekwa ngisho junior esikoleni esiphakeme. Izingane ngokuvamile ungacabangi mayelana nezimbangela zayo, kodwa empeleni ukwazi ukuthi kungani okuthile akuvunyelwe, futhi kuyathakazelisa futhi ewusizo.
imisebenzi Aritmethikhi, okuyinto efundisa esikoleni, ukungalingani ngokuya wezibalo. Bayaqaphela umnyuziki zimbili kuphela kulezi imisebenzi - kwalokho futhi ukubuyabuyelela. Ahlanganisiwe nomqondo self, kanye nazo zonke ezinye izenzo nge izinombolo ngandlela-thile zisekelwe lezi ezimbili. Okungukuthi, akunakwenzeka kuphela ukwehlukana ngo-zero, kodwa division ngokuvamile.
Yini okungekho lonke isinyathelo? Nalapha futhi, isikole Kuyaziwa ukuthi, isibonelo, ususe ezine kusukela eziyisikhombisa - ke ukuthatha ushokoledi eziyisikhombisa, zozine adle futhi sibale yibo ahlale. Kodwa izibalo akusho ukuxazulula inkinga udla amaswidi kanye ngokuvamile azibonayo ngokuhlukile ngokuphelele. Kubo kukhona kwalokho kuphela, it has a irekhodi 7 - 4 = inombolo okuyinto isamba inombolo 4 kuyoba ulingana 7. Lokho, ngoba zezibalo, 7 - 4 - is kwesibalo ifasitela lokuzula x + 4 = 7 Leli akulona ukukhupha, kodwa inkinga - ukuthola inombolo ukuthi udinga ukubeka esikhundleni x.
Kuyefana nasendleleni ukwahlukana futhi ukubuyabuyelela. Kwehlukanisa eziyishumi ezimbili, mladsheklassnikov ibeka candies eziyishumi ku yizinqwaba ezimbili alinganayo. Sezibalo efanayo lapha ukubona kwesibalo: 2 · x = 10.
Futhi kuyacaca ukuthi kungani kuba division emthethweni ngo-zero: akunakwenzeka. Record 6: 0 kufanele ibe ezothando 0 · x = 6. Ngamanye amazwi, ufuna ukuthola inombolo kungenziwa iphindwe zero bese 6. Kodwa siyazi ukuthi ukuphindaphinda ngo-zero njalo unika zero. Lena yindawo ebalulekile zero.
Ngakho, kukhona isibalo esingangaleso esingalotshwa, yanda ngezinkulungwane zero, ebengakhipha ezinye inombolo ngaphandle zero. Ngakho, le ndaba ayinakho isixazululo, ingekho inamba enjalo, okwakuyoholela kuhlobene nezinga irekhodi 6: 0, okungukuthi, akwenzi mqondo. Ukungabi nangqondo zawo, nithi avimbela division ngo-zero.
Ingabe zero ehlukaniswa zero?
Kungenzeka zero ehlukaniswa zero? I kwesibalo 0 · x = 0 akunzima, futhi zingafundwa njengoba x kakhulu zero bese 0 · 0 = 0. Khona 0: 0 = 0? Kodwa uma, isibonelo, ukuthatha i-x iyunithi, futhi wathola 0 · 1 = 0. Kungaba uthathwe x ngokuvamile iyiphi inombolo oyifunayo futhi hlukanisa imali yazo ngo-zero, futhi umphumela izohlala injalo: 0: 0 = 9, 0: 0 = 51 ngakho ku.
Ngakho, kulesi equation, ungafaka iyiphi inombolo ngokuphelele, futhi awukwazi ukhethe noma iyiphi ethile, akunakwenzeka ukuthola ukuthi mangaki esiqokiwe 0 irekhodi: 0. Lokho, leli rekhodi futhi akwenzi mqondo, nokuhlukanisa ngo-zero namanje kungenzeki: yena abahlukanisiwe ngisho ngesikhathi yena.
Lokho kuyisici esibalulekile ukusebenza division, okungukuthi, zokuphindaphinda inombolo ehambisana zero.
Umbuzo uyasala: kungani ayikwazi ukuhlukanisa ngo-zero, kodwa kungenziwa emalini? Singasho ukuthi lokhu wezibalo iqala le nkinga ezithakazelisayo. Ukuze sithole impendulo, kumelwe ufunde incazelo esisemthethweni zezibalo amaqoqo ezinombolo angu- futhi ukuhlangabezana imisebenzi kubo. Ngokwesibonelo, kukhona yini elula kuphela, kodwa futhi eqela, division okuyinto ihlukile division ezivamile. It is hhayi kufakwe ohlelweni lwezifundo zesikole, kodwa izinkulumo inyuvesi mathematics ukuqala nalokhu.
Ukunakekela amagonandoda entwasahlobo, inkathazo
Ibhizinisi wabathengi akuzona Realtor!
"Jaguar XF»: Ukucaciswa, test drive, izithombe kanye nokubuyekeza abanikazi imoto
Izindleko obala futhi ngokuphelele
Abazingela goose entwasahlobo
FGBOU IN Magnitogorsk State Technical University (MSTU) yaqanjwa G. I. Nosova: amandla, izikolo ezidlulayo
Ebay Auction e-Ukraine